I-Curlew Dome, indawo yokuphumula - I-Airbnb
I-Curlew Dome, indawo yokuphumula
Castro, Los Lagos, i-Chile
Indlu eyindilinga ibungazwe ngu-Fernando
Indawo yokuphumula, nqamula futhi ujabulele. Sikunikeza Dome ethokomele imizuzu 10 kusukela Plaza de Castro futhi imizuzu engu-10 kusukela Dalcahue, it has 2 okulala futhi umthamo abantu 4, esitolo umzuzu owodwa kude, eduze Ixhaphozi lapho izinyoni ezifudukayo kuyagcinwa (Flamingo, Curlew, njll) .
Sine-Wifi, ukufudumeza kwe-pellet, i-Jacuzzi enezinto ze-spa, igumbi lokuhlala elinethezekile, ukuzola okukhulu kanye nezinyathelo zokuhlanzeka ezifanele.
Isikhala sasiklanyelwe ukunqamula, ngaphezu kwalokho umhlobiso wayo ubonakala ngokuhlenga isiko leChiloe ngoboya bemvelo nobudayiwe obukhona ngokuhlobisa kanye nempahla; ukhuni lwe-larch, umsayipuresi ovela ku-guaitecas kanye ne-mañio, zikhona kokubili zokuhlobisa, zesakhiwo kanye nefenisha, ezenziwe ngabadwebi endaweni.
Umkhakha wePutemún unezitolo ezinkulu, izindawo zokudlela, ukubuka izinyoni, izinkantolo eziningi futhi useduze kakhulu neCastro, nayo esenhlonhlweni yaseRilán, okuwumkhakha lapho iPutemún itholakala khona, kukhona inhlobonhlobo yamadolobha, imibono namabhishi ongawahlola.
Sixhumana nawe ngocingo noma nge-imeyili, futhi uma ufuna ukwazi isiqhingi sikweluleka ohambweni lwakho, njengoba siphatha imininingwane.
Hlola ezinye izinketho ezise- Castro namaphethelo